Imigodi-Newway Valve Co., Ltd.
Ukwembiwa kwemigodi kubhekiselele ekutsalweni kweeminerali zendalo ezifana nezinto eziqinileyo (ezifana namalahle neeminerali), ulwelo (olufana ne-oyile ekrwada) okanye iigesi (ezifana nerhasi yendalo). Kubandakanya imigodi engaphantsi komhlaba okanye ngaphezulu komhlaba, ukusebenza kwemigodi, kunye nawo wonke umsebenzi oncedisayo, njengokusila, ukuxhamla kunye nonyango, olwenziwa ngokubanzi kufutshane nesiza somgodi okanye isiza ukucubungula imathiriyeli ekrwada, yimisebenzi yolu hlobo.
I-NEWSWAY VALVE ibonelela ngezisombululo kushishino lwezemigodi kuya kunceda ekuphuculeni ukhuseleko lokusingqongileyo, iimeko zokusebenza zenkqubo yemibhobho, isiseko sendawo kunye nobomi benkonzo yevalvu, kunye nokunciphisa ixesha lokuphumla okubangelwa kulondolozo.
I-NEWSWAY VALVE inokubonelela ngesinyithi kunye namashishini eeminerali ngenkonzo engqongqo yeevalvu zebhola ezihlala ngentsimbi ezimelana nemeko-bume egqithisileyo. Iivalvu zethu ze-autoclave zibe nempumelelo ekusebenzeni ngokupheleleyo kwimibhobho eludaka emhlabeni jikelele.
Imarike yezicelo eziphambili:
Ukusetyenziswa kweMigodi yentsimbi kunye nokuNyibilikiswa
Ukusetyenziswa kweMigodi yeAluminiyam kunye nokuLungiswa
Ukusetyenziswa kweNickel Mine kunye nokuLungiswa
Ukusetyenziswa kweMigodi yeKopolo kunye nokuLungiswa
IiMveliso eziphambili eziBandakanyayo:
Intsimbi ehleli kwiValve yeBhola
Ivalufa yeSango yentsimbi eqhelekileyo yeCast